Home News Itoobiya oo heshiiska uga baxday Farmaajo iyo qunsul cusub oo Hargeeysa loosoo...
Itoobiya oo heshiiska uga baxday Farmaajo iyo qunsul cusub oo Hargeeysa loosoo magacaabay
Dowlada Itoobiya ayaa dib usoo celisay qunsuliyadii ay kulaheyd Somaliland, taas oo loo soo magacaabay sargaal sare.
Dhowaan xubno ka tirsan Dowlada Soomaaliya ayaa ku faanay in ay soo afjareen xiriirkii Itoobiya iyo Somaliland kadib markii uu Abiye Axmed kala baxay Hargeysa qunsulkisii.
Laakiin hada waxaa muuqata in Itoobiya aaney wali ka tanaasulin la macaamilka gaarka ah ee Somaliland.
Shamsudiin Axmed Rooble ayaa loo magacaabay qunsulka Itoobiya u fadhin doona Somaliland, waxaana uu badalaya Berehe Tesfaye, oo 10kii sanno ee lasoo dhaafay joogay Hargeysa.
Shamsudiin oo ah Soomaali-Itoobiyaan ayaa horrey usoo noqday wasiir kuxigeen, xildhibaan iyo safiirka wadamada Kenya iyo Jabuuti.
Marka la eego waaya aragnimadiisa iyo sida uu ula socdo siyaasada gobalka, waxaa muuqata in Itoobiya ay xubin muhiim ah usoo magacaawday Somaliland.
Magacabistan ayaa imaaneysa iyadoo uu jiro heshiis saddex geesood ah oo u dhaxeeya Somalia, Itoobiya iyo Eritrea, kaas oo waxyaabaha lagu heshiiyay ay ka mid tahay in dal walba uu dhowro madaxbanaanida midka kale.
Previous articleWar Deg Deg ah: C/casiis Lafta-gareen oo ku guuleeystay Doorashada Madaxtinimo ee K/galbeed
Next articleRiyada Farmaajo ma rumooyi doontaa? Xoog shisheeya oo aan xeelad lahayn malagu xukumi karaa dal iyo dad?